Cabdiwali Gooni: Galmudug Casharo kama Baran Weli Waayo-aragnimadii Hore – Radio Daljir
Cabdiwali Gooni: Galmudug Casharo kama Baran Weli Waayo-aragnimadii Hore
Seteembar 27, 2017 1:42 b 0
Galmudug waxaa la asaasay August 11, 2006 xilligaas oo Madaxweyne maamulkaas u doorteen Maxamed Warsame Cali ( Kiimiko ) iyadda oo dastuurka ku qortay in mudada xil haynta Madaxweynaha tahay 3 sanno.
Saddex sanno ka dib sanadkii 2009, ayaa doorasho mar kale maamulkaasi galay waxaa Madaxweyne loogu doortay Maxamed Warsame Caalin, inkastoo uu xilka ku qabsaday Musharaxii kale Axmed Shariif Cali Hilowle, lix bilood ka dib December 28, 2009, kulan ka dhacay Muqdisho ayaa lagu soo afjaray khilaafka dheeraa ee u dhaxeeyey labada Siyaasiyin, xilka madaxtinimada Galmudug tanaasul ka sameeyey Axmed Shariif Cali Hilowle.
1 August 2012 oo ku beeganeed wakhtigii doorashada ayaa mar kale Xildhibaanada Galmudug Madaxweyne u doorteen Gen. Cabdi Xassan Cawaale Qeybdiid iyadda oo uu la tartamay Cabdisamad Nuur Guuleed, Balse isla maalintaas waxaa Madaxweyne kale loo doortay Maxamuud Cabdi Cilmi ( Timo-kala-jeex).
Hasse yeeshe dadaalka iyo wakhtiga badan oo uu Gen. Qeybdiid geliyey Galmudug waxa ay keentay in ninkii kale ee ku haystay xilka Madaxweynaha uusan dib ugu laaban dalka isaga oo mudo dheer ku shaqeynayey magaaladda Nayroobi ee dalka Kenya. Gen. Qeybdiid waxa uu ku guuleystay qabashada shir ay yeeshan 3 maamul ee ka talinayey Galgaduud iyo qeyb ka mid ah Mudug kuwaas oo kala ahaa Ximan-Xeeb, Ahlu Suna iyo Galmudug, midaas oo dhashay in Galmudug degto magaaladda Cadaado oo maamulkii Ximan-Xeeb ka talinaysay.
July 4, 2015- Sida nidaamka ahaa waxaa Madaxweyne loo doortay Cabdikariin Xuseen Guuleed isaga oo helay 49 cod, halka Axmed Macalin Fiqi oo ahaa musharaxii kula tartamayay wareegii ugu dambeeyay uu helay 40 cod. January 10, 2017 -Nasiib daro oo ku beegneed 1 sanno, 6 bilood iyo 6 beri una dhigantay (556 beri) ayaa Baarlamaanka Galmudug waxa ay xilka ka qaadeen Madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ahaa nin dhalinyaro ah aadna ugu dhawaa Madaxweynihii Dowladda Federalka Xassan Sheikh Maxamuud isaga oo xaalad caafimaad dalka uga maqan.
May 3, 2017, oo ku beegneyd 3 bilood iyo 23 beri ka dib xil ka qaadistii Cabdikariin Guuleed una dhiganta (113 cisho) ayaa mar kale Baarlamaanka Galmudug wuxuu doortay Axmed Ducaale Geelle Xaaf isaga oo xilkaasi kula tartameen Musharaxiintii kala ahaa Prof. C/qaadir Shirwac iyo Axmed Shariif Cali Hilowle.
Maanta, September 26, 2017- oo ku beegan 4 bilood iyo 23 beri una dhigana ( 146 beri) Xildhibaanada Galmduug waxa ay xilka ka xayuubiyeen Axmed Ducaale Geele Xaaf iyadda oo 52 Xildhibaan u codeysay halka 2 Xildhibaan diideen 1 Xildhibaana ka aamusay. Tirada guud ee gollaha baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa ah 89 Xildhibaan. iyadda oo August 21,2017- Madaxweynaha xilka maanta laga qaaday Axmed Ducaale Geele Xaaf magacaabay Golihiisii Wasiirada oo ka koobanaa 52 xubnood kuwaasi oo isugu jira 22 wasiir, 22 wasiir ku xigeeno iyo 8 wasiiru dowlayaal.
Dhismaha Galmudug oo soo maray marxalado adag ayaa buuxin shuruuda laga rabay Dowlad xubin ka ah Dowladda Federalka sida ku cad dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Qodobkiisa 49aad, ee ka hadlaya Tirada, Xudduudaha Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka iyo Degmooyinka, Firqadiisa 6aad oo oranaysa ” Ugu yaraan laba gobol iyo ka badan ayaa ku midoobi kara Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka iyaga xor u ah go’aankooda.”
Aragti ahaan waxa aan qabaa in maantay Galmudug u baahan tahay in loo soo jeesto sidii loo bad-baadin lahaa maadama inta badan dhulka ay sheegto ay maamulaan Kooxdaha Al-Shabaab iyo Alhu-suunah, Alhu-suunahna gacanta ku hayso magaaladda Dhuusa-mareeb oo caasimad u ah Galmudug sida dastuurkeeda ku qoran.
Qore: Cabdiwali Gooni
Qormooyinka Daljir 54 Wararka 26118
Warka Arooryo iyo Xuseen Madar, Daljir Bossaso (dhegayso)
Bulshadada Gobolada Dhexe oo Taageeray Xilkaqaadista Xaaf, Dardaaranna u Diray Xildhibaanada (dhegayso)
on Boosaaso: Barashada Farsamada Gacanta (Warbixin)Information
on Boosaaso: Barashada Farsamada Gacanta (Warbixin)Ku biirid
on Beesha Gaaljecel ee Hawiye oo kasoo horjeesatay qaraar kasoo baxay Golaha Shacabka Baarlamaanka SomaaliyaAsc
on Boosaaso: Barashada Farsamada Gacanta (Warbixin)Waxaan Doonayaa Cawimaad Barashada Korontada Laydhka
on Boosaaso: Barashada Farsamada Gacanta (Warbixin)Waxaan doonayaa inan barto Laydhka iyo waxyaabaha uu ukala baxo
on Wargelin muhiim u ah shacabka magaalada Garoowe (dhegayso)and uficn
on Sidee lacag ku samayn kartaa adigo gurigaga jooga? (dhegayso|daawo)Wan doonayaa
on Maxaad ka xasuusataa habkii hore ee Soomaalidu isku kabi jirtay ? (dhegayso)waxa aaan odhan laahaa af soomaaligu waa qabyo ee hala dhameesrito
Kaydka Bil Dooro Seteembar 2021 Agoosto 2021 Luulyo 2021 Juunyo 2021 Maajo 2021 Abriil 2021 Maarso 2021 Febraayo 2021 Janaayo 2021 Diseembar 2020 Nofeembar 2020 Oktoobar 2020 Seteembar 2020 Agoosto 2020 Luulyo 2020 Juunyo 2020 Maajo 2020 Abriil 2020 Maarso 2020 Febraayo 2020 Janaayo 2020 Diseembar 2019 Nofeembar 2019 Oktoobar 2019 Seteembar 2019 Agoosto 2019 Luulyo 2019 Juunyo 2019 Maajo 2019 Abriil 2019 Maarso 2019 Febraayo 2019 Janaayo 2019 Diseembar 2018 Nofeembar 2018 Oktoobar 2018 Seteembar 2018 Agoosto 2018 Luulyo 2018 Juunyo 2018 Maajo 2018 Abriil 2018 Maarso 2018 Febraayo 2018 Janaayo 2018 Diseembar 2017 Nofeembar 2017 Oktoobar 2017 Seteembar 2017 Agoosto 2017 Luulyo 2017 Juunyo 2017 Maajo 2017 Abriil 2017 Maarso 2017 Febraayo 2017 Janaayo 2017 Diseembar 2016 Nofeembar 2016 Oktoobar 2016 Seteembar 2016 Agoosto 2016 Luulyo 2016 Juunyo 2016 Maajo 2016 Abriil 2016 Maarso 2016 Febraayo 2016 Janaayo 2016 Diseembar 2015 Nofeembar 2015 Oktoobar 2015 Seteembar 2015 Agoosto 2015 Luulyo 2015 Juunyo 2015 Maajo 2015 Abriil 2015 Janaayo 2014 Diseembar 2013 Nofeembar 2013 Oktoobar 2013 Seteembar 2013 Agoosto 2013 Luulyo 2013 Juunyo 2013 Maajo 2013 Abriil 2013 Maarso 2013 Febraayo 2013 Janaayo 2013 Diseembar 2012 Nofeembar 2012 Oktoobar 2012 Seteembar 2012 Agoosto 2012 Luulyo 2012 Juunyo 2012 Maajo 2012 Abriil 2012 Maarso 2012 Febraayo 2012 Janaayo 2012 Diseembar 2011 Nofeembar 2011 Oktoobar 2011 Seteembar 2011 Agoosto 2011 Luulyo 2011 Juunyo 2011 Maajo 2011 Abriil 2011 Maarso 2011 Febraayo 2011 Janaayo 2011 Diseembar 2010 Nofeembar 2010 Oktoobar 2010 Seteembar 2010 Agoosto 2010 Luulyo 2010 Juunyo 2010 Maajo 2010 Abriil 2010 Maarso 2010 Febraayo 2010 Janaayo 2010 Diseembar 2009 Nofeembar 2009 Oktoobar 2009 Seteembar 2009 Agoosto 2009 Luulyo 2009 Juunyo 2009 Maajo 2009